Rato Testosterone Isocapronate ntụ ntụ (15262-86-9) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Testosterone Isocapronate ntụ ntụ
Rating: SKU: 15262-86-9. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nhazi nke Testosterone Isocapronate ntụ ntụ (15262-86-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Testosterone Isocaproate ntụ ntụ, ọ bụghị ụbụrụ anabolic ma ọ bụ ester nke nwere ike itinye aka na steroid n'otu ụdị ahụ dị ka onye na-ewu ewu Cypionate ma ọ bụ Enanthate esters. Isocaproate nwekwara ike itinye aka na hormone testosterone, ma na ihe gbasara Isocaproate nke a ga-abụ nanị ebe anyị na-ahụ ya agbakwunyere.
Testosterone Isocapronate ntụ ntụ video
Testosterone Isocapronate ntụ ntụ isi agwa
aha: Testosterone Isocapronate ntụ ntụ
Usoro Molecular: C25H38O3
Molekụla arọ: 386.5
Melt Point: 53-55 ℃
Nchekwa Nche: 2-8 ℃
Testosterone Isocapronate ntụ ntụ (CAS 15262-86-9) aha aha Sustanon 100 (kwụsịrị), Sustanon 250, Omnadren 250 ma ọ bụ testosterone 4-methylvalerate
Testosterone Isocapronate ntụ ntụ Usage
Isocaproate, ọ bụghị ụbụrụ anabolic kama ọ bụ ester nke nwere ike itinye aka na steroid n'otu ụdị ahụ dị ka onye na-ewu ewu Cypionate ma ọ bụ Enanthate esters. Dị ka Cypionate na Enanthate, Isocaproate nwekwara ike itinye aka na hormone testosterone, ma na ihe gbasara Isocaproate nke a ga-abụ nanị ebe anyị na-ahụ ya agbakwunyere. Testosterone-Isocaproate, otu ụdị ester bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịnụ; ọ bụrụ na ịchọta ya mgbe ahụ, ọ bụ karịa ka ọ ga - abụrịrị ọkachamara pụrụ iche, ọ dịghịkwa ihe kpatara ọ bụla mkpa Testosterone-Isocaproate na ụdị otu ester. Ebee ka anyị ga-achọta Isocaproate ester ọtụtụ ebe na ebe ọ na-eje ozi a nnukwu uru bụ na testosterone mixtures; kpọmkwem Omnadren na Sustanon-250. Omnadren na Sustanon-250 bụ ogige testosterone nke nwere mmiri anọ dị; anọ dị iche iche dị iche iche nke dị iche iche dị iche iche nke na-eme otu ngwongwo testosterone. Maka nzube nile siri ike, ogige abụọ a dị ka ihe yiri nke ahụ; ihe ha na-emecha dị ka otu ihe dị iche iche dị na ester, ma dịka ndị ahụ, a pụrụ inweta otu uru ahụ.
Kedu ihe nyocha nke Testosterone Isocapronate ntụ ntụ
Na ogige abụọ ị nwere 250mg / ml dosing nke testosterone na site na ngwakọta nke obere na nnukwu esters ị na-enweta uru ndị metụtara ụdị niile. Dịka ọmụmaatụ, ị na-enweta uru site na ịmepụta testosterone ngwa ngwa n'ihi Prophouseate na Phenylpropionate esters, ị na-enwetakwa uru nke testosterone na-adịru ogologo oge n'ihi Caproate or Decanoate ester. N'ihe banyere ester Isocaproate, nke a bụ ezigbo ester nke na-arụ ọrụ dị n'etiti nghọta dị n'etiti obere etu ukwu. N'ọnọdụ ọ bụla, Isocaproate ester na-arụ ọrụ dị oke mkpa dịka ọ na-enyere aka ịnọgide na-enwe ọganihu ọbara, na site na ngụkọta nke ị na-enweta uru testosterone zuru oke ruo ogologo oge. N'iburu nke a n'uche, anyị chọrọ ileba anya na ọdịdị bụ isi, uru nke ntinye, ma, n'ezie, mmetụta dị n'akụkụ na iji mee nke a nwere ike ime ka ị nweta ihe mgbakwunye na-eme nke ọma ịchọrọ.
Olee otú Testosterone Isocapronate ntụ ntụ si arụ ọrụ
Ebe ọ bụ na Isocaproate bụ nanị ester, ọ bụghị ụbụrụ anabolic, naanị ihe anyị chọrọ bụ ịghọta hormone ọ na-agbakwunye na, na nke a, hormone ahụ bụ testosterone. Testosterone bụ ụbụrụ anabolic na androgenic nwere ike nke mmadụ niile mepụtara. Site na mgbakwunye, anyị na-enye ụdị mmepụta ihe site na nchịkwa dị iche iche; ahụ adịghị ama ọdịiche dị na ụdị ọdịdị a ma ọ bụ ihe ọ na-emepụta; ọ bụ otu hormone ahụ. Ịrụ ọrụ na anụ ahụ anyị, mmekọahụ na ọbụna uche uche, hormone testosterone karịrị ihe dị mkpa, ọ bụkwa naanị ihe ga-edozi nsogbu dị ala ọ kwesịrị ịdị adị. N'ezie, site n'inye ọbụna ụbụrụ na-esote karịa ihe a pụrụ ịmepụta, site n'ịdị na-ebute nguzo dị elu ka anyị na-eme ka àgwà ndị ahụ dị mma; anyị na-eme ka arụmọrụ dị mma karịa ka enwere ọtụtụ testosterone dị n'ahụ. Site na ntinye dị otú ahụ, a na-eme ka njikọ protein dịkwuo elu, ọnụego ya-nke mkpụrụ ndụ na-emepụta proteins, dịka njigide nitrogen; nitrogen na-anọchi anya 16% nke ngwongwo niile nke anụ ahụ niile. Ọzọkwa, ntinye dị otú ahụ na-eme ka ụbụrụ ọbara ọbara ọbara dịkwuo elu, si otú ahụ na-amụba ọbara oxygenation, ọbụnakwa na-ebelata mmepụta glucocorticoid hormone. Nye ndị na-amaghị ihe glucocorticoids bụ, ndị a bụ hormones siri ike nke na-ebibi anụ ahụ na-akwalite uru uru.
Ọ bụ ezie na ndị ahụ bụ àgwà dị egwu, testosterone na-emekwa ka mmepụta insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) mepụtara; IGF-1 bụ kemịpụta peptide nke puru iche nke nwere ike anabolic; obughi ikwuputa otutu ihe ndi ozo. Site na nke a na àgwà niile a kpọtụrụ aha n'elu, a na-eme ka ikuku anabolic zuru ezu, a na-emeghachi omume gị na-eme ka ọ dịkwuo mma. N'ezie, ị nwere ike ịjụ ihe ihe a nile pụtara-maka uru, ma ị nwere ike ịjụ ihe ihe a nile pụtara n'echiche ọgwụgwọ? Dịka ọ gbasara ọgwụgwọ ọrịa, àgwà niile a tụlere n'elu na-achọtaghi ma mgbakwunye na-eme ka ha laghachi n'ogo kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, dị ka testosterone na-achịkwa nkwenye anyị, arụmọrụ mmekọahụ na ọbụna na-ekere òkè n'ikike ike anyị, nghọta doro anya na ọdịdị n'ozuzu ha niile ka mma. N'ezie, ndị a na-ejikarị eme ihe maka ọgwụgwọ ọgwụgwọ, na-ejikarị otu ogige testosterone na-eme ihe iji nweta njedebe dị otú ahụ; dị ka ọ dị, arụmọrụ bụ naanị nchegbu a ebe a, na nke ahụ n'uche ka anyị lee anya.
Uru nke Testosterone Isocapronate ntụ ntụ
Enwere ike ịbaba uru dị iche iche nke ogige ndị dị na Omnadren na Sustanon-250 n'ime ụzọ abụọ; uru ndị na-enweta site na àgwà ndị dị n'elu na ihe ụdị onyinye a na-enye ma e jiri ya tụnyere otu ụdị ester. Dị ka a tụlere na mbụ, uru nke ngwakọta testosterone bụ iji nye ụwa kachasị mma na nghọta obere ester, nke a na-enyekwa ụbụrụ na-eme ngwa ngwa na-enwe mmetụta na-adịgide adịgide n'ogologo oge. Nke ahụ nwere ike ịdị mfe nghọta, ma ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ya. Mgbe ahụ, anyị nwere ezigbo uru ndị na-adabere na àgwà ndị dị n'elu, na dịka Omnadren na Sustanon-250 fọrọ nke nta ka eji ha rụọ ọrụ anyị ga-elekwasị anya na uru ndị dị na ìhè ahụ.
Maka onye na-eme egwuregwu, onye ọ bụla nke na - achọ itinye ọnụ ọgụgụ dị elu na ike, ọtụtụ ụdị nke nhọrọ bụ nhọrọ zuru oke ka ha ga - ebuli nkwalite abụọ ahụ elu. Ọzọkwa, site na ikuku ikuku metabolic, ị na-enwezi ike ịnweta ọtụtụ ụgbụ na-enweghị ụba anụ ahụ, nke ahụ bara uru. N'ezie, a pụrụ iji otu ogige ndị ahụ mee ihe maka ịcha oke; mgbe niile, nkwalite metabolism na-eme ka ụbụrụ ọkụ na-arịwanye elu, nakwa dị ka testosterone bụ anụ ahụ dị egwu dị egwu na-echekwa na ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka atụmatụ mmebi ọ bụla.
Ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, ọ bụ ezie na nzube gị nke iji ndị a Isocaproate dabeere na testosterone ogige ga-eme ka nkwarụ muscular gị dịkwuo mma; ha ga-eme ka ọnụ ọgụgụ gị gbakee ma nyekwa gị ike. Ị gaghị ada mbà ngwa ngwa, ị ga-agwọ ya, ahụ gị ga-arụkwa ọrụ na ngwa ngwa ngwa ngwa karị, ma ọ bụrụ na nke ahụ abụghị nkwalite mmemme ihe ọ bụla bụ. N'ọtụtụ ụzọ, steroid testosterone bụ otu n'ime ihe kachasị mfe ịghọta, nke kachasị mfe, ma ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị mfe, ọ gaghị aba uru karịa ma eleghị anya, ọ bụ steroid na-eme ka a na-ahụkarị etrogenic kasị njọ. Ọzọkwa, mgbe ọ na-abịakwute nwoke tozuru etozu, ọ bụkwa otu n'ime ihe kachasị mma, ọ dịghịkwa ihe bara uru karịa nke ahụ.
Testosterone Isocapronate Powder (CAS 15262-86-9)
Testosterone Isocapronate ntụ ntụ Marketing
Testosterone Isocapronate ntụ ntụ nwere ihe ọ bụla
Mmetụta dị iche iche nke ogige testosterone nke Isocaproate ga-abụ otu dịka ogige testosterone nile, nke a pụtara n'ụzọ dị mfe na ha ga-ekwe omume na n'ozuzu 100% bụ onye okenye ahụ na-ahụ ike. N'ezie, nwoke tozuru etozu na-apụtaghị na ị na-enwe nsogbu siri ike, ma ọ pụtakwara na ọbara mgbali gị na ọkwa cholesterol kwesịrị ekwesị na ị nọ na ahụike zuru oke. Ọzọkwa, iji ọrụ eme ihe dị oke mkpa, nke a pụtara na ị dị njikere ịgbakwunye na ụzọ nke na-akwalite ahụike dị otú ahụ; ọ bụrụ na ị na - akpata nsogbu ahụ gị, a pụghị ịhọpụta nke a dịka ụkọ ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ka anyị leba anya n'akụkụ nke nwere ike ịnweta-mmetụta nke testosterone, chọpụta ihe ị nwere ike ime banyere ha ma hụ na ọganihu gị.
Ọ bụrụ na ọ bụ onyinye testosterone, nke a na-aga maka ogige ndị dị ka Omnadren na Sustanon-250 ma ọ bụ ihe ọ bụla ị nwere ike iche na ọ na-aga aromatize; akuku aromata nke na-ezo aka na ntughari nke testosterone n'ime estrogen. Dika estrogen na-ebili elu, nke a nwere ike iduga ma tinye aka na otu n'ime nsogbu nke steroidal nke kachasị emetụta ya; ekele, ha nile nwere ike izere. N'ezie, enwere mmetụta dị otu na-eme n'ezie na ndị niile na-agbakwụnye ma na-abaghị uru site n'iji ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị; anyị ga-atụle nke ahụ n'ọdịnihu ma ka anyị buru ụzọ hụ na ọ ga-ekwe omume; akụkụ nwere ike-mmetụta nke testosterone gụnyere:
• Gynecomastia - dị ka etiti afọ nke estrogen, hormone ahụ na-ejikọta na ndị na-anabata ya na-eme ka gynecomastia ma ọ bụ na-eme ka ọ dịkwuo oke ara, ma nke a agaghị eme. Site n'iji onye mmegide Aromatase (AI) dịka Anastrozole (Arimidex) ma ọ bụ Letrozole (Femara) ị ga-ezere ọnọdụ dị otú ahụ. AI na-egbochi usoro aromatase ime ihe, ọbụnakwa belata afọjuju nke estrogen nile; ma ọ bụrụ na ọ dịghị adị ya enweghị ike ịkpata nsogbu. O doro anya na enwere ike iji Nhọrọ Adrogen Rescept Modulators (SERM's) maka nzube a dị ka Tamoxifen Citrate (Nolvadex), ma ha anaghị ezuru. Ọrụ SERM site n'igosi ndị nabatara ya ka ọ ghara igbochi estrogen n'aka; ha anaghị egbochi aromatation ma ọ bụ afọ ala nke estrogen dị ala, nke a pụtara na AI bụ n'ezie amara nke nzọpụta anyị.
• Njide mmiri - Estrogen na-emebiga ihe ókè site na aromatisation bụ onye na-eme ihe ọjọọ, na etiti estrogen na-eme ka ị ghọtakwuo oge ịmalite ịmalite ịmalite. Mgbe ị na-eri nri, karịsịa carbohydrates ị ga-ejide mmiri, ma ọ bụrụ na afọ etiti estrogen dị elu, ọ ga-akawanye njọ. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-eji otu AI ma na-achịkwa ihe oriri gị, i kwesịghị inwe nsogbu, ma ọ bụrụ na ị na-eji AI ma ka na-ejide mmiri karịa ka ọ ga-abụ na nri gị abụghị ihe kwesịrị ekwesị dịka i nwere ike ikwere na ọ ga-abụ .
• Cholesterol dị elu - estrogen nwere ike itinye aka na ọkwa LDL cholesterol, ma dosing na ndụ gị dum ga-arụ ọrụ dị ukwuu karịa ihe ọ bụla ọzọ. N'ihi nke a, ezigbo doses dị ezigbo mkpa, ma ọ bụ otú ahụ ka ibi ndụ nke cholesterol enyi. Nke a pụtara nri kwesịrị ekwesị, ọtụtụ mmega ahụ na izere ọrụ niile nwere ike inwe mmetụta ọjọọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime nke a, na-eche na ị nweghị mkpụrụ ndụ ihe nketa na cholesterol dị elu ị kwesịrị ịdị mma.
• Nsogbu ọbara dị elu - estrogen nwere ike inye aka na ọbara mgbali elu, ma dosing na ndụ gị dum ga-arụ ọrụ dị ukwuu karịa ihe ọ bụla ọzọ. N'ihi nke a, usoro kwesịrị ekwesị dị oke mkpa, ma otú ahụ ka ibi ndụ ndụ nke ọbara mgbali elu bụ enyi. Nke a pụtara nri kwesịrị ekwesị, ọtụtụ mmega ahụ na izere ọrụ niile nwere ike inwe mmetụta ọjọọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime nke a, na-eche na ị nweghị mkpụrụ ndụ ihe nketa na ọbara mgbali elu ị kwesịrị ịdị mma.
Dị ka anyị kwuru, mmetụta ndị dị n'elu-mmetụta nwere ike ịme, mana enwere otu mmetụta na-eme ka ndị niile na-agbakwunye; nkwụsị nke mmepụta nke testosterone gị. Nke a abụghị echiche pụrụ iche nke Isocaproate testosterone ogige ma ọ bụ ihe ọ bụla testosterone; na-eziokwu, ọ bụ echiche nke ga-adịgide adịgide na ihe kachasị na steroid niile. N'ezie, mmechi nke testosterone bụ nke nwere ike iduga n'ọnọdụ dị ala nke testosterone, ma n'okwu gị, ebe ọ bụ na ị na-agbakwunye na testosteous testosterone nke a enweghị nchegbu; mgbe niile, ị na-enye ahụ gị niile ọ chọrọ. Ọbụna nke ahụ, dị ka mmepụta ihe na-emepụta nke ọma, nke a ga-eme ka testicles gị gaa atrophy, ma enwere ozi ọma. Ozugbo ọ bụla a na-akwụsị ịṅụ ọgwụ steroid kpamkpam na ihe niile hormones nke steroid na-eme ka ị gbasaa usoro gị ga-alaghachi n'ogo ha dị ka mmepụta nke testosterone dị iche iche ga-amalite ọzọ. Ọ ghaghị ịma; ịghaghachi na-echeghị na i mebisighị HPTA gị n'ụzọ dị njọ n'ihi omume mmezigharị na-adịghị mma, nakwa na ị ghara ịta ahụhụ site na testosterone dị ala tupu ị gbakwunye.
Esi zụta Testosterone Isocapronate ntụ ntụ (CAS 15262-86-9) sitere na AASraw
Norethisterone ntụ ntụ (68-22-4)